ယနေ့ ပို့စ် (သြဂုတ်) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Best Web Awards » ယနေ့ ပို့စ် (သြဂုတ်)	70
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Aug 2, 2012 in Best Web Awards, Mandalay Gazette | 70 comments
စိန်ဗိုက်ရဲ့ “ဒီလို စိတယ် ထင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ ပို့ စ်မှာ ကိုဂီနဲ့ စိန်ဗိုက် ပြောထားတာကို ဖတ်ပြီးပြီးနောက်မှာ …
ကျနော့် အနေနဲ့ ဆုဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တက်လာတဲ့ ဂေဇက်က ပို့ စ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ လွယ်လင့်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်စေဖို့ ယခု ပို့စ် အား တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏ …
ဆုရရှိသူ – ၀င့်ပြုံးမြင့်
ပို့စ်အမည် – ၄၀ ကျော် ကျမရဲ့ အသည်းကွဲ တမ်းချင်း
ဂေဇက်ပို့ စ်များ စုစည်းမှု
ငပလီမဟုတ်တဲ့ ကမ်းခြေအသစ် ရွာတစ်ရွာဆီ
***ကန္တာရ ကိုမွေးမြူခြင်း***
အသေဝနာစ ဗာလနံ စာရင်းစစ်ချုပ် ပြုတ်ရခြင်းအကြောင်း
:: BHG :Recovery Mode
စီးပွားရေး နဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တိုးတက်ရေး
PART- 4: Centre Point of Magento development guide line.
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (9 )
“ မြေဖျက်ပိုး ”
“ Something Borrowed ” movie
စုန်းမလေး ပန်တဲ့ ဘီလူးပန်း….
သနားကြပါ …. ခင်ညာ
ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ (၂)
နံနက်ခင်းလေးများကတော့ ကိုခင်ခအတွက် -(2)
ရတနာမိုင် Second Album (ပဖဘဗမ)
ရင် နင့် အောင်
၀ဋ် ကြွေး ရှိ မျှ ကြေပါစေတော့ ….ချစ်သူ။
MICT Park မှ ပန်းကလေးများ
၀ဋ် ကြွေး ရှိ မျှ ကြေပါစေတော့ ….ချစ်သူ။( ဇာတ်သိမ်း)
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (8 )…
လွဲခဲ့တယ် – နွဲခဲ့တယ်
အယုံမလွယ်လိုက်ပါနဲ့ဒါမျိုးတွေကို…
စင်ပေါ်က စော် — စင်အောက်က ကျွန်တော်
ခြသေ့င်္ မဟုတ်လိုက်တဲ့ ကြောင်ကြီး (သတင်း)
တိမ်တောင်သက်တန့် မန္တလေး နန်းမြို့ရိုးနဲ့ကျုံးရေပြင်
Ko out of..
♥ငရဲ ဓားထမ်း စောင့်နေသည်♥
PART- 3: Centre spot of Magento development channel line
Chery ကား များတွင် ကင်ဆာ၊ တီဘီဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပါလား
ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသည့် မြန်မာလူငယ်များအတွက်
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (7 )
နွေးထွေးစွာ တန်ဖိုးထားခြင်းများကို လိုအပ်ပါသည်
ကဗျာမဟုတ်တဲ့ ကဗျာ (အပိုင်း2)
ပျားရည် – ၁
နိဂြောဓသာမဏေ နှင့် ရှင်အရဟံ-စာမျက်နှာ-၁၃၉
Win Paing Soe
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – August 2012
သူတို့ခေါင်းမှာ သန်းတွေကို ပန်းလိုမြန်း
ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ တည်နေရာကို ရှာလို့ရပြီတဲ့နော်
ပြီးပြီးပျောက်ပျောက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ပေါ့
မွေးရပ်မြေနဲ့ ခွဲခွာပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာ
တစ်ခုမကျန်ချွတ် သင်တန်းဖွင့်နေသော ဒါရိုက်တာ
အမေကြီးကားမှမြန်မာ ခြာဝန်တချိုဟာ ခရီုနီလူတန်းစားလား?
စာမျက်နှာ ၇၂တွင် တွေ့ရသော စိတ်ပုတီး
မာတိကာ အမှတ် (၆) တူနေသော စုတ်ချက်သုံးချက်
နေ့လည်စာ (ကြက်ပဲဟင်းနဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်)
*** မြို့ပြ ညနေ ***
Lydia Ko က ကမ်ဘာ့စံချိန်ကိုချိုးလိုက်ပြီ
Pye Kun Zaw
ဆ = ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့် အတွက် surrealism လက်ဆောင်လေး
Ko Khin Lwin
ဆွစ်နိုင်ငံကအနှစ် ( ၈၇ – ၁၀၀ )သက်တမ်းရှိ ရေကာတာကြီးတေ
“အတု အစစ်နှင့် ….. အစစ် အတု”
ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း
25.8.2012 စနေည ပွဲစဉ်များ
ငါရှိတာ မသိပါစေနဲ့ အပိုင်း-၃
ကုတင်ပေါ်ကမဆင်းစတမ်းခွေနှင့် ပွားမိသော အကုသိုလ်များ
***သီချင်းမဖြစ်တဲ့ .. ကဗျာ***
မြန်မာ NLP (ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအောက်က)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် Los Angeles မြို့ခရီးစဉ်
This is what I sent to Mizzima News
မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ(၁၂)
ပုဂံမှာ လုပ်တဲ. ဟိုတယ် နှင်. ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း
တူ တူ ပုန်းတမ်း ကစားမယ်။
အလွမ်း လား… ၊ အင်း… ခပ်ပါးပါးလေးပါ ။
Prince Harry သတင်း
သင်းကွဲငှက်ရဲ့ ရင့်ကြူးဟန် …..
2013 ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာတွေ အရှက်မကွဲ စေချင်
စ = စိတ်ကူးအဓိက အနုပညာ ၀ါဒ
ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ဖြစ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု
သံမဒဂျီး သံမဒဂျီး သံမတဂျီးကိုခြစ်တယ် Love
ဒီလို ဘဲ ကြည့် နေ တော့ မှာလား ??
အက ( Dance )
မှတ်ဥာဏ်နှင့် တွေးတော ဆင်ခြင်ဥာဏ်…
မောင်မိုးပြာ၏ ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ(၁၁)
တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ ပွင့်တဲ့ပန်း
THE EYE (horror)
လူခြောက်လေး မွေးဖွား … တဲ့
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အခမဲ့တက်ရောက်ရမည့် အခွင့်အရေး
သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ရခိုင်များအသက်ထွက်ရလိမ့်မည်
မျက်ကန်းမျိုးချစ် နှင့် မျက်လုံးမြင်သော မျိုးချစ်
ကျွတ် နဲ့ခြ ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရပါ့…
သင့် ကိုဆိုက်ဘာ တပ်မတော်က အလိုရှိသည်
လူပါးဝတဲ့ SKY NET
“စကားပန်းဖြူဖြူ ကြိုက်သလောက်သာယူ “
ည ….. သည်
ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းက ပိုသင့်လျော်မည်
တိုင်းပြုပြည်ပြုများ ပြည်ထောင်”စု”သင့်၊ မ”စု”သင့်
အပျိုကြီးများ အားသာချက်ပါတဲ့ 
PART- 2: Centre Point of Magento development guide line
ဟိုအတွေး ဒီအတွေး၊ ဟိုရေး ဒီရေး။
၀မ်းအိုဝမ်း ကြီး သူရဲကောင်းကြီး ကျန်းမာပါစေ
Re: လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘာကြောင့် ၀န်ထမ်း မမြဲကြတာလဲ ?
တောင်မော်ရွာ ဆရာတော်ကြီး၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်
အဟာရပြည့်ဝ လှပ စားစရာ.…
Hacked BY Blink Hacker Group!
မိုးလေ ကြားက မော်လမြိုင် ခရီး
ကြေးမုံဂျီးအမျိုး Na Li နိုင်ပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ
“အလွမ်းပုရပိုဒ်မှာ အတောင်ခတ်ခွင့်မရှိတဲ့ ငှက်”
ko khin kha
ငဆန်နီရေဒီယို( လေး )
ဆွစ်နိုင်ငံAlps တောင်တန်းကနှစ်စဉ်မီးပုံးပျံပွဲတော် – XI
C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ-၃
၀ါသနာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကား၊ လိပ်စာ နှင့် ရွှံ့ ရုပ်တချို့
PART- 1: Centre Point of Magento development guide line
တွယ်ညိတတ်သော (အပိုင်း ၄)
Paint ပန်းချီ အားပေးကြဦးနော်
င = ငယ်စဉ်ကလို..နှလုံးသား….
တနင်္လာည (သို့ မဟုတ်) အင်္ဂါနံနက်
မောင်မိုးပြာ၏ ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၁၀)
နေ၀င်းမောင်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အနုပညာ
ဘာစီ ၃ဂိုးပြတ်ပါ့မလား ၊ ဆန်းဒေးညပွဲများ
မြန်မာနိင်ငံကို လူbarbie လာသွားတာ….
ဆွစ်နိုင်ငံကရေကန်အလှအပတွေ – Swiss Lakes X
“သွေး အ မျိုး အ စား ၊ သိ ထား သင့် ဘွယ် ရာ”
စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ
ရောက်ရာပေါက်ရာမြင်မြင်ရာက ပန်းစုံရောင်းစုံ့ (အပိုင်းနှစ်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်မှု့ မရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောလ
ကျွန်ုပ်၏ ပုံပြင်၊ ဤသို့ ခပ်ဆင်ဆင်
18.8.2012 စနေနေ့ ည ပွဲစဉ်များ
တို့ပြည် တို့မြေ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ..
ရေကာတာအမြင့်ကြီးမှ ဂျိမ်းဘွန်လိုခုန်ဆင်းကြသူများ – IX
ကဗျာလေး နာမည်က “ခဏတာ” ပါ
ရွာထဲက သူငယ်ချင်းများကို ရယ်စေချင်လို့
မြန်မာအစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ လူထု နှင့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒ
*** ဆည်းဆာ ***
” နှင်းတောင်တန်းပေါ်က မျက်လုံးစိမ်းများ ”
နိုင်ငံသား ပါဝင်ပတ်သက်မှု နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး – ခင်မမမျိုး
Paint နဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်ကြမယ
အဆင့်မီ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာကျွင်းကျင်သူများ မွေးထုတ်မည်
Fashion & style စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက်…..
UMFCCI တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် IT Info Day For Youth ပွဲ
ဒေါက်တာများဖြစ်မလားလို့ Honorary Doctorate
ရောက်ရာပေါက်ရာမြင်မြင်ရာက ပန်းစုံရောင်စုံ့ (အပိုင်းတစ်)
အူးခိုင် နှင့် အိုင်ရှလွတ်
ဆရာမတစ်ယောက်နှင့် ပြောဖြစ်ခဲ့သမျှ၏ နောက်ဆက်တွဲ…
သံတွဲမြို့နယ်၊ လင်းသာရွာက မြေယာအမှု
Large Swiss Dams Built 100 -120 Years Ago VIII
ဒီရွာထဲက မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်။
C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ-၂
ပုဂံရှေးဟောင်းဇုန်ကြေးများ နှင်. ပွင်.လင်းမြင်သာမှု
Shar Thet Man
မြန်မာပြည်က Cow Boy
အင်းလေး တစ်ညအိပ်/နှစ်ရက် လူ ၂၀ ဦးသတ်မှတ်ခရီးစဉ်
***မိခင်မြတ်သို့ … ဖတ်ဖို့ စာ***
အန္ဒိယစာပေသမိုင်း ဗုဒ္ဓစာပေကဏ္ဍ (ကောက်နုတ်တင်ပြခြင်း အပိုင်း ၂)
ဂ မ္ဘီရ … ဗိုက်ပူနံကားနှင့် ပါဝါ မကူ ရေမရှူ ကြေး..
C J အဖြစ် သတင်းပို့တာပါခင်ဗျာ။
ဝေဘူတောင် နှင့် ဝေဘူချောင်ရှိ ဘုရားများနှင့် မြင်ကွင်းများ
iသံလုံး နှင့် ဖုတ်သွင်း ခေတ်
ဦးကြောင်ကြီး၊ ကြောင်ဝတုတ်၊ ကြောင်လေးတို့ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ
Si Toneက ဒီရွာလေး ထဲ ၀င်တာ ၂ပတ်လောက်ရှိပါပီ
လူဆိုတာမျောက်က ဆင်းသက်တဲ့ ကိုလေကျယ်
Switzerland ဆွစ်စလန်ရှုခင်း အလှအပတွေ VI
လယ်မြေ ဧက ၄၀၀၀၀ ကျော်အား တောင်သူများသို့ ခွဲဝေပေးနိုင်ရန်
ဆွစ်နိုင်ငံကအနှစ် (၁၂၀) ကျော်တဲ့ ရေကာတာတွေ
ချိုတဲ့ နေသော စာသင်ကျောင်းလေးတဲ့
win win 11
အာဏာရှိသူ ငွေကြေးချမ်းသာသူ လူသားအကျိူး ပိုပြီးလုပ်နိင်မှာပါ
မန္တလေး ကိုင်းတန်းညဈေး မပြောင်းရွှေ့ရေး
သင့်အသည်း ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စွမ်းအင် အပြည့်အဝရရှိစေရန်
Switzerland ဆွစ်စလန်ရှုခင်း အလှအပတွေ V
စာနယ်ဇင်းအမြုတေကောင်စီကို အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များကို လက်ခံဖို့ အင်ဒိုနီးရှားကို HRW ကပြောကြား
သတင်းထူး ကြားရတော. မယ် မျော်…
ငါ့ စကား ငါ့ တရား
စိတ် ကူး ထဲ က “သူ” (၂)
စဉ်းစား စရာလေးများ (၁၀)
အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့
*** လ …. ဖမ်းသူ ***
မောင်မိုးပြာ၏ ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၉)
Switzerland ဆွစ်စလန်ရှုခင်း အလှအပတွေ IV
ငွေရတုအကြို ၂၄ နှစ် (အပိုင်း ၂)
No Title (*)
လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုစွပ်စွဲချက် မဟုတ်မမှန်ကြောင်း
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း (၆၆)
‎”ဘာလုပ်စားကြမလဲ ” တဲ့ 
ဘဏ် ၂ မှာ တစ်ထောင်တန် အစုတ်လေးတစ်ရွှက်လဲမိတယ်
မော်လူးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ (8.8.88 နေ့ အမှတ်တရ)
နေပါစေ ချစ်လို့ ( ၃ )
“ တချိန်တုန်းက ” “ မိန်းမ ”
ပည်ထောင်စု ချည်နှောင်ပြု ဒီကောင်အတု Supreme
ထမ်စမ်းလှိုဏ်ဂူတော်… …ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (6 )
သင် ပြုံး ပြ လိုက်ပါ ။
Dozen Plus ၏ Website လွှင်တင်ပြီးစီးခြင်း
Lake Geneva ရေကန်အနားကရှုခင်းအလှအပတွေ
ငွေရတုအကြို ၂၄ နှစ် (အပိုင်း ၁)
ဘာအလုပ် လုပ်လုပ် မအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေသလား?
၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၄၄ ) ဇာတ်သိမ်း
၀ိပဿနာ ဆိုတာ…ဘုရားဟောတဲ့ တရားလား?
မောင်မိုးပြာ၏ ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၈)
စိတ် ကူး ထဲ က “သူ”(၁)
ပိုစ့်မော်ဒန် ပုဂံသူရဲကောင်း ပုံပြင်
နေပါစေ ချစ်လို့ ( ၂ )
အသွားမတူ အပြန်လည်းမတူခဲ့တဲ့ တူညီသောခရီးတစ်ခု”(အပိုင်းနှစ်)
တာရာမင်းဝေ နှင့် အမေးအဖြေများ
ဆုငွေ (၁၀) သိန်းကျော် ချီးမြှင့်မည့်အစီအစဉ်
ယနေ့မနက် အဓိပတိကားနှင့် စစ်ကားတီအီးကားနဲ့ ချိတ်မိခြင်း
***၂၅ ပြည့်ဖို့ ( ၁ )အလို***
၀င်ြ့ပုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၄၃ )
မုနိရှင်ကန်တော်တွင်းမှာ—လွှတ်သွင်းကာ လှုမိသော “ငါး”
မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကိုလက်ရှိအတိုင်း ၁၀ရက်သာ ပိတ်မည်ဟု
တာရာမင်းဝေ ကွယ်လွန်ခြင်း (၅)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
အစာကြေ ရင်ချောင် နည်းလမ်းကောင်း
Wireless Docking Audio DA-E550
ခ = ခက်ခဲလှတဲ့ အရာတွေ……
Bendy and Scalable e-Commerce Solutions
လူခေါင်း နှင်. မြွေ
ကိုးရီးယား ဧည်.လမ်းညွှန် တွေ ဘာလုပ် စားရ မှာ လဲ ?????
၀င်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၄၂ )
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၈
ကျောင်း ပိတ် ရက် လေး များ
Switzerland ဆွစ်စလန်နိုင်ငံအကြောင်းလေ့လာရအောင် II
Le Liebo printemps et en été une véritable
အသွားမတူ အပြန်လည်းမတူခဲ့တဲ့ တူညီသောခရီးတစ်ခု
ဘောင်းဘီချွတ် တဲ့ ကြယ်
လောကမှာ အဆင်မပြေမူများနှင့်ကြုံသောခါ ဘာလုပ်ရမလဲ
မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား များနဲ့ ဆင် တစ်ကောင်…
ပရိုမိုးရှင်း မော်ဒယ် ဆိုသည်မှာ…
ဖုန်း SIM card ပျက်သွားသောအခါ
ဟိုင်ဒြိုဂျင် ပါရောက်ဆိုဒ် စက်ရုံပေါက်ကွဲမှု
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲနှင့်
တောင်ကုတ်က ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့ တင်ပြခြင်း
သမ္မတကြီး၏သဘောထားအပေါ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ၏ အမြင်
၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၄ ၁ )
ကျွန်တော့် အတွေး (ဝေဖန်ချက်)
မန္တလေးတွင် ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း
နော်ဝေနိုင်ငံက ရေကာတာများ – Norway Dams XX
ချစ်သော စံပါယ် ……
အွန်လိုင်း ၊ ပရဟိတ နှင့် ကျနော်…
ကျနော်နှင့် မီးတစ်ပွင့် အရှုပ်တော်ပုံ
ပု၊ ဒိ၊ အာ နှင့် အတိတ်၊ ပစ္စုပန်၊ အနာဂတ်…
ကျွန်တော်..ရရှိလိုက်တဲ့မွေးနေ့ လက်ဆောင်
ကျွန်တော် ငှားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ကြည့်မှန် တစ်ချပ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရွာသားများအတွက် ၀ါဝင်လက်ဆောင်
ရှေးမြန်မာ.ငွေထည် – မန္တှလေးနန်းတော်ပုံစံ ငယ်
ရင်ကို ခွဲသော တောင်တန်းများ
ဖောက်ခွဲရေးသမားကြောင်ကြီး မသေပါ။ Pardon
အမိ မြန်မာပြည်သို့ အလည်ပြန်ခြင်း-4
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း [...]
If this type of traitor are still in duty,
*** ဧည့်သည် ***
သမိုင်းဝင် ပဲခူးမြို့ ကျိုက်ပွန်ဘုရားဖူးရအောင်
*** ကဗျာ့ … ကဗျာ ***
ကန့် ကွက်ဖြစ်အောင် ကန့် ကွက်ကြပါ
၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၄ ၀ )
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၏ ဌာနပျက်စီးစေရန် [...]
ချစ်ခြင်းရဲ့ … ကောင်းကင်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အား ၂ဝ၁၃တွင် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်မည်
နိုင်ငံပြုပညာနိဒါန်း – မိုးသန်း
ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်က စိတ္တဇလူသတ်သ္မား သတင်း
လူငယ် ၂၀ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
*** မုဆိုးမ …. ကျိန်စာ ***
“ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ ရဲ့ အ လွမ်း”
၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၃၉ )
How allocate process of designs on [...]
လူအချင်းချင်း ဦးနှောက်ဆေး ခြင်း…ကင်းရှင်းကြပါစေ..
အမိ မြန်မာပြည်သို့ အလည်ပြန်ခြင်း-3
ကျွန်တော် နှင့် ဆရီးရွှာ ( ၁ )
ရနေ့ ပို့စ် ……
ရသစာပေ စာမူပို့စ်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း(သြဂုတ်လ)
သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာသို့ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေး [...]
က = က , သာ.. ကပါ…။
*** ငိုနေတဲ့ …. လ ***
ပခုက္ကူတံတားအနီး လက်ပံချေပေါ်ရွာက မြွေဘုရားမှ [...]
အိမ်စာ ထ လုပ်တဲ့ မနက်..
one candle စေတနာရှင်လူငယ်များ အဖွဲ့၏ ခရီးစဉ် (၁၅) (၃၁.၇.၂၀၁၂)
ရတနာသိုက်ရှာပုံတော် – ၇
လမ်းပြောင်းပြန်၊ တစ်စီးလောက်နှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု
ပင်းဒယ နှင်. ပုဂံ က ၀င် ကြေး ကောက် ခံ မှု များ
မယုံရဘူးလား ၁၉၉ ရေ….
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၇ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၃ )
-မေတ္တာလက်ဖြင့် ကမ္ဘာအား အလင်းဖွင့်-
အားလုံးပဲ ဘောင်ကျော်တယ်လို့တော့ မထင်နဲ့ဗျာ …
ကျုပ်က စေတနာ ဗလပွနဲ့ အားအားယားယား လက်ကမြင်းမိသွားတာမို့ ပါ …
manawphyulay says: အင်း တံခါးစောင့်ကြီး ဦးဦးဘလက် ပျောက်နေတာနဲ့ ပိုစ့်တွေလည်း ခုလို ပြန်မြင်ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဦးဦးဘလက်လို့တော့ မပါတော့ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၇ ထောင့်ကြီးရေ… အမြဲတင်ပေးထားနော်။
kotun winlatt says: တော်တော် အားထုတ်ထားရတာပဲ…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ထီဖွင့်ရန် .. အဲလေ .. ပြီးဆုံးရန် ..
ခြစ်ယက်တာ လိုဘာဒေါ့တီ ..
ကွီ .. ကွိ .. :D
htoosan says: မပြောနဲ့ မပြောနဲ့ .. ရက်နဲနဲလောက် ထပ်ဆွဲဆန့်လို့ ၇ဘူးလားဟင်.. ဘာဘဲပြောပြော အံကြီး ကျေးဇူး နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လထက် သက်သက်သာသာ ပိုစ့် ပြန်ရှာလို့ ရသွားပြီ။
သိုင်းကျူး ဖိုးအောင်ထွန်း ခေါါ် ခေါ် ခေါ် …… :grin:
သုရှင် says: နေ့တိုင်း ခဏ ခဏ update လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1671
ရွှေ ကြည် says: မဟာရာဇာအံစာတုံးရေ ရှာရဖွေရလွယ်ကူသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလာပြောတာ။
လလည်းကုန်ကာနီးပြီဆိုတော့ အားရပါးရကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်သွားပါကြောင်း :D
Inz@ghi says: အူးလေး အံဇာ ရေ..
ပိုစ့် က ၇၀၀ ကျော်နေပြီဗျ…
ပျမ်းမျှ တနေ့.. ပိုစ့် ၂၀ နှုန်း မကတော့ဘူး…
ဂိန် ဃိန် ကိန်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3102
Foreign Resident says: ဟုတ်ပါ့ ၊ လူများလို့သာတော်တော့တယ် ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ခုရက်ပိုင်း
ပို့စ်တွေ ပိုပိုတောင် များလာသလိုပဲ ..
အဟဲ .. :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1544
nozomi says: သီရီသုဓမ္မ ဘာညာကွိကွ မဟာရာဇာအံဇာတုံး ရေ
ဒီ ပို့စ် လေးက တရွာလုံးအတွက် တော်တော်ကို အကျိုးများတဲ့ ပို့စ် လေးပါ
ခါတိုင်း တစ်ခုခု ပြန်ရှာချင်ရင် ရွာလည်သလောက် အခု တော်တော်ကို အဆင်ပြေသွားတာပါ
ကိုအံစာတုံး အဆင်ပြေရင် တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
ဒီပို့စ် ယနေ့ပို့စ်…..ကို လကုန်ရင် အခုလအတွက်ဆို ယနေ့ပို့စ် ( သြဂုတ်) ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ ဆက်သိမ်းထားစေချင်ပါတယ် နောက်လ ၁ ရက် ကစပြီး ယနေ့ပို့စ် ….ဆက်လုပ်သွား လကုန်ရင်
ယနေ့ပို့စ် (စက်တင်ဘာ) ဆိုတာမျိုး ဆို ကိုအံစာ ပို့စ် လေး ဖွင့်တာနဲ့ ပြန်ရှာရ တော်တော်လွယ်သွားမှာပါ
ဟိုမင်းသားအတွက် ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့လဲ ဆိုချင်နေပြီ ဗျာ
အံ….စာလေးပါပဲ တရွာလုံးရဲ့ အသည်းစွဲ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အနော်လည်း နောက်လအတွက်ကို
ဂလိုလေး လုပ်ပေးဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်ဂျ ..
ပိုအဆင်ပြေသွား မလားလို့ ..
အဲ့ဂလို တွေးနေမိလို့ပါ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4615
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ပြီးပါပြီ ခညာဒို့ …
ပြီးပါပြီ .. ပျော်ရိုက်ဒါ .. ကွီကွိ .. :D
အခုပို့စ်မှာ လာရောက် ကွန်မန့်ချီးမြှင့်သွားကြပါကုန်သော
ချစ်စွာသော ရွာသူားအပေါင်းအား ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 180
zarlay says: အံဇာတုံးဆိုလှိမ့်လို့ရတာပေါ့နော်…ဟဲ…ဟဲ
surmi says: ဘိုအံရေ
၄ ရက်နေ့ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်း ပွဲကြည့် ဖို့ ဖိတ်တယ်နော
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1429
mobile (mandalay) says: ကိုအံစာဂျီးရေ ယနေ့ပို့စ်(သြဂုတ်)လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ
ကျနော် မန်ဘာမ၀င်ခင်ကတည်းက ပို့စ်လေးတွေကို